Xidigaha Ku Fashilmay Iyo Kuwa Qatarta Ku Ahaa Garoonka Kulankii Young Boys Vs Manchester United
HomeWararka CiyaarahaXidigaha ku Fashilmay iyo kuwa Qatarta ku ahaa Garoonka Kulankii Young Boys Vs Manchester United
Goolkii daqiiqadii 95aad ee uu dhaliyay Jordan Siebatcheu ayaa ku hogaamisay BSC Young Boys guul 2-1 kaga badiyeen Manchester United kulankii UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo ayaa hogaanka u dhiibay United, iyadoo Nicolas Moumi Ngamaleu uu u barbareeyay kooxda martida loo ahaa.
qalad uu sameeyay Aaron Wan-Bissaka ayaa keentay in kooxda United ay 10 Ciyaaryahan ku ciyaaraan kadib markii kaarka cas la siiyay xidigan.
Waxaa halkan ku Qiimeeneynaa Xidigaha Fashilmay iyo kuwa Qatarta ku ahaa Qaroonka.
#1 : Top: Cristiano Ronaldo
Waxa uu ahaa Xidig garoonka ka dhex muuqday isagoo kooxda ku hogaamiyay in ay daqiiqadii 13aad ciyaarta la wareegto, waxa uu sidoo kale abuuray kubado.
#2 Flop: Aaron Wan-Bissaka
Aaron Wan-bissaka ayaa kamid ahaa xidigaha caawa ku fashilmay garoonka kadib kaarka caasaanka ee lasiiyay.
#3 Top: Jordan Siebatcheu
Xidigan ayaa ahaa mid aad u wanaagsan kadib goolkiisa cajiib ahaa ee uu ku bar-bareeyay United Daqiiqadii 66aad, Weeraryahanka Mareykanka ayaa muujiyey degganaansho aad u wanaagsan
#4 Flop: Jesse Lingard
Waxa uu ahaa mid ku fashilmay ciyaarta isagoo kubad qalad ah gadaal u baasay waxana uu sabab u ahaa in dhamadka ciyaarta gool laga dhaliyo united isla markana laga badiyo.
#5 Hit: Nicolas Moumi Ngamaleu
Daqiiqadii 95aad ayuu goolka guusha ka dhaliyay united waxana uu kamid aha xidigaha aadka uga muuqday garoonka.